05/01/2018 - 06/01/2018 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
တာချီလိတ်မြို့ ပါဆတ်ရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်အခန်းငှား အတွင်း အပုပ်နံ့ရ၍ ၀င်ကြည့်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးလျှက်တွေ့ရှိ
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့၊ ပါဆတ် ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နေအိမ်အခန်းအတွင်း အပုပ်နံ့ရ၍ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အခန်း အတွင်းကြည့်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦးနားကြပ်တပ်ကာ သေဆုံးလျက် အနေအထားဖြင့် တွေ့ရှိရ၍ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယနေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၃၁)ရက် နေ့လည်ပိုင်းက တာချီလိတ်နာရေး ကူညီမှု အသင်းက သဂြိုင်္လ်ပေး လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ မေလ(၃၀)ရက်နေ့ ည(၉)နာရီ ခန့်အချိန်က တာချီလိတ်မြို့၊ ပါဆတ်ရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်အခန်းငှား အခန်း အမှတ်(၂)မှာ ငှားရမ်း နေထိုင်သူ ကိုလင်းဆိုသူရဲ့ အခန်းအတွင်းမှ အပုပ်နံ့များ ရနေ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများက ၀င်ရောက်ကြည့်ရာမှ သေဆုံးလျက်ဖြင့် တွေ့ရှိရပြီး နေအိမ်ခန်းထဲကို တာချီလိတ်မြို့မ ရဲစခန်းမှ စခန်းမှုး ဒုရဲမှူး မျိုးခိုင် နှင့်သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အပါအ၀င် ပါဆတ်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာမှာ အခန်းတွင်ငှားရမ်း နေထိုင်သူ ကိုလင်း ဆိုသူမှာ အခန်းအတွင်း ခြင်ထောင် ထောင်ထားတဲ့ ခုတင် ပေါ်မှာ နားတွင် နားကြပ်တပ်လျှက် အနေအထားဖြင့် သေဆုံး နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီသေဆုံးသူ ကိုလင်း ဆိုသူမှာ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်စား တတ်သူဖြစ်ကြောင်း၊ အခန်းအတွင်းမှ အပုပ်နံ့ရသဖြင့် ရှေ့တံခါး မကြီးအား တွန်းကြည့် သော်လည်း အတွင်း မှ ဂျက်ထိုးထားသဖြင့် အိမ်နောက်ဘေးကို သွားရောက်ကာ ဖွင့်ထားတဲ့ ပြူတင်းပေါက်မှ တဆင့် လှမ်းကြည့်ရာက သေဆုံးနေတာကို တွေ့ရှိရတာဖြစ်ကြောင်း နေအိမ် လိုင်းခန်း တာဝန် က ပြောပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သေဆုံးသူမှာ အရက် သောက်စား မူးယစ်ပြီး ခုတင်ပေါ်မှာ ဖုန်းနားကြပ် တပ်ကာ သီချင်းနားထောင်၍ လေပန်ကာ ဖွင့်လျှက်ဖြင့် အိပ်ပျော်သွားရာမှ အအေးပတ်ကာ ဦးနှောက်သွေးကြော ပြတ်၍ သေဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ သေဆုံးမှု အတွက် တာချီလိတ်မြို့မ ရဲစခန်းမှာ သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၂၂ /၂၀၁၈ ဖြင့် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း တာချီလိတ်မြို့မ ရဲစခန်းမှ သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် သေဆုံးသူ၏ ဆွေမျိုးများလည်း ရောက်ရှိလာခြင်း မရှိတဲ့ အတွက် တာချီလိတ်နာရေးကူညီမှုအသင်းက ယနေ့ မေလ (၃၁)ရက်နေ့ နေ့လည်(၁) နာရီခွဲ ဝန်းကျင်အချိန် က တာချီလိတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံရှိ ရင်ခွဲရုံမှ တဆင့် တာချီလိတ်မြို့မ သုသာန်သို့ပို့ဆောင်ကို မီးဂြုင်္ိလ်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လုံးခင်းကျေးရွာတွင် မြေစာပုံပြိုကျရာမှ အမျိုးသားနှစ်ဦးသေဆုံး
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မှော်စီစာကျေးရွာတွင် မေလ(၃၁)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီက မြေစာပုံပြိုကျရာမှ အမျိုးသားနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးများ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ စံတော်ဝင်လုပ်ကွက်အတွင်း ရေမဆေးသမား ဦးမြင့်ကျော်(၄၁)နှစ်နှင့် ဦးအောင်ဘို(၄၀)နှစ်တို့ ရေမဆေးရှာဖွေစဉ် အမြင့်ပေ(၁၅၀)ခန့်မှ မြေစာသည် အကျယ်ပေ(၄၀၀)ခန့်ရှိ ရွံ့နွံကန်ထဲသို့ပြိုကျရာမှ မြေစာပိမိ၍ သေဆုံးခဲ့ကာ လုံးခင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ် မေလအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း၌ မိုးရွာသွန်းမှုများကြောင့် မြေစာပုံပြိုကျသည့်ဖြစ်စဉ်များ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီး မိုးတွင်းကာလကျရောက်လာပြီဖြစ်သည့်အတွက် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့် ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးတွင် နေထိုင် ကြသူများအနေဖြင့် မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကိုလည်းကောင်း သတိပြုနေထိုင်ကြရန် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြောင်းမြတွင် မြစ်အတွင်းရေချိုးဆင်းရာမှ ရေနစ်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား
မြောင်းမြ မေ ၃၁
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ မြောင်းမြမြို့နယ်တွင် ယနေ့နေ့လည် (၃း၃၀)ခန့်က အမျိုးသားတစ်ဦး ရေချိုးဆင်းရာမှ ရေနစ်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သေဆုံးသူမှာ ဦးခင်ဇော် အသက်(၄၀)နှစ် ဖြစ်ပြီး မြောင်းမြခရိုင် မြစန္ဒာရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူ၏ ရုပ်အလောင်းကို ၄င်း၏ဇနီးဖြစ်သူမှ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးရာတွင် အလောင်းအားမှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် နှုတ်ခမ်းများပြာ၍ အရေပြားများတွန့်နေကာ ပြင်ပဒဏ်ရာတစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ သေဆုံးသူ၏ ရုပ်အလောင်းအား မြောင်းမြခရိုင်/မြို့နယ်/အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ မြောင်းမြဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ မြောင်းမြဆေးရုံမှ ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးဆွေမှ PR044ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရီယဲလ် ကနေ နည်းပြ ဇီဒန်း ထွက်ပြီ
ချိန်ပီယံ လိဂ် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲ အောင် နည်းပြ အဖြစ် ကိုင်ခဲ့
ရီယဲလ် အသင်း နည်းပြ ဖြစ်တဲ့ ဇီဒန်း က ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ ရီယဲလ် မက်ဒရစ် အသင်း ကနေ ထွက်ပြီလို့ ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
ဇီဒန်းဟာ ရီယဲလ် ကို ချိန်ပီယံ လိဂ် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲ အောင် နည်းပြ အဖြစ် ကိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဇီဒန်းက ရီယဲလ် အသင်း ကို သူချစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့လည်း အခု အချိန်မှာတော့ ရီယဲလ်ဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ပုံစံမျိုး လိုအပ်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှာ ရီယဲလ် အတွက် နည်းပြ အဖြစ် ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဇီဒန်းဟာ သူ့ လက်ထက်မှာ ဆုဖလား ၉ ခု တိတိ ရယူနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ကတည်းက သူ့အနေနဲ့ ရီယဲလ် အတွက် ဘာမှ ထပ်ပြီး လုပ်မပေး နိုင်ရင် ထွက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကွေးတိုင်း သရက်မြို့တွင် မုန်တိုင်းငယ် တိုက်ခတ်မှုကြောင့် စက်လှေအစီး (၂၀)ကျော် နစ်မြုပ်
မြန်မာနိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ မုန်တိုင်းငယ်ဝင်ရောက်မှုနှင့်အတူ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်မြို့တွင်လည်း မိုးသက်လေပြင်းများ တိုက်ခတ်၍ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော စက်လှေ(၂၁)စီး နစ်မြုပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ စက်လှေများမှာ သရက်မြို့မှ အောင်လံမြို့သို့ ပြေးဆွဲသော နန်းထိုက်ဟိန်းကူးတို့လုပ်ငန်းရှိ မြင်းကောင် ရေ(၂၀)အောက် စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်(ပဲ့ထောင်)များဖြစ်ပြီး မေ ၃၁ ရက်၊ နေ့လယ်ပိုင်းအထိ စက်လှေ(၁၄)စီး ခန့်ကို ပြန်လည်ဆယ်ယူပြီးဖြစ်ကာ ကျန်စက်လှေများကို ဆက်လက်ဆယ်ယူနေကြောင်း သိရသည်။
"အရင်တုန်းကလည်း ကမ်းမှာဒီလိုပဲ ကြိုးချည်ပြီးကပ်ထားတာပဲ။ တစ်ခါမှ ဒီလိုမဖြစ်ဖူးဘူး။အခုတစ်ခါပဲဖြစ်သွား တာ။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစာရင်းတွေကို တွက်ချက်ပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ကို တင်ပြသွားမှာပါ။"ဟု သရက်မြို့ အခြေစိုက် မြင်းကောင်ရေ (၂၀)အောက် စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်အသင်း ဥက္ကဌ ဦးကံမြင့်က ပြောသည်။
စက်လှေအသစ်တစ်စီးလျှင် အမျိုးအစားအလိုက် ကျပ်သိန်း(၃၀)မှ ကျပ်သိန်း(၆၀)ထိတန်ကြေးရှိပြီး စက်လှေများ လှေဦး ထိခိုက်ခြင်း၊ အမိုးထိခိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောကြောင့် စက်လှေတစ်စီးလျှင် ကျပ် (၂)သိန်းမှ ကျပ်(၈)သိန်းဖိုးထိ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
"စက်လှေက ကုန်းပေါ်ရောက်လာရင်တောင် ဖာရ၊ ထေးရဦးမှာနဲ့ ပြန်ပြင်ရမှာနဲ့ဆို ရက်ကကြာဦးမှာ၊ စက်လှေ မမောင်းရတော့ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသွားတာပေါ့။ အခုက ကျောင်းဖွင့်ရာသီလည်း ရောက်ပြီဆိုတော့ ကလေး တွေ ကျောင်းစရိတ်တွေ၊ ဘာတွေလည်း ခက်ခဲသွားတာပေါ့။"ဟု စက်လှေမောင်းသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုထိုက်ဦးက ပြောသည်။စက်လှေများမှာ ကမ်းအနီးမှာပင် နစ်မြုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စက်လှေများနစ်မြုပ်မှုကြောင့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေအိုင်အတွင်း ရေဆင်းကစားသည့် ကလေးသုံးဦး ရေနစ်သေဆုံး
သထုံ၊ မေ၊ ၃၁
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ဒူးရင်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဇိုင်းကျေးရွာတွင် မေလ ၃၁ ရက်၊ နေ့လယ်က ရွာနွားစားကျက်အတွင်းရှိ ရေအိုင်အတွင်း ရေဆင်းကစားသည့် ကလေးသုံးဦး ရေနစ်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကလေးသုံးဦး ရေနစ်သေဆုံးကြောင်း ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူမှ အကြောင်း ကြားသဖြင့် သုဓမ္မ၀တီ နယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်တင်ချိုနှင့်အဖွဲ့တို့သည် သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ရွာထိပ်ငါးကန်အနီး ရွာ၏နွားစားကျက်အတွင်းရှိ ပေ ၁၀၀ ပတ်လည်ခန့်ရှိ ရေအိုင်ထဲမှ အနက် ၇ ပေခန့်ရှိသည့် ချိုင့်အတွင်းသို့ မောင်စိုင်းထက်၊ ၉ နှစ် (ဘ) ဦးချစ်ဝင်း၊ ကဇိုင်းကျေးရွာ၊ မောင်အောင်ဖြိုးဦး၊ ၁၀ နှစ် (ဘ) ဦးအောင်ထွန်းဦး၊ ကဇိုင်းကျေးရွာနှင့် မောင်အောင်မြတ်သူ၊ ၉ နှစ် (ဘ) ဦးအောင်မျိုးဝင်း ကဇိုင်းကျေးရွာနေသူတို့ သုံးဦးမှာ ရေဆင်းကစားရာမှ ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် ကလေးသုံးဦး သေဆုံးရခြင်းအား ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် ကို သုဓမ္မ၀တီနယ်မြေရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်လှစ်ကာ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ပြည်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့က ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးစဉ် / Photo: Myit Taoo - facebook
စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက် တရားစွဲခံထားရတဲ့အမှုတွေကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုပြီး ဒီကနေ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာမှာ ဆန္ဒပြသူတွေထဲက ၈ ဦးကို ပြည်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ အခြေခံပညာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ(အကသ) ကျောင်းသားတွေ ကို ပြည်မြို့က ရွှေဆံတော်စေတီရှေ့အရောက်မှာ ဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဝန်းရံပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကိုမေတ္တာဦးက ပြောပါတယ်။
"ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆိုပြီး ကျနော်တို့က တောင်းဆိုတယ်၊ ကလေးတွေက ရွှေဆံတော်လည်းရောက်ရော ကလေးတွေကိုဖမ်းတယ်၊ ၅ ယောက်ပါသွားတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဘုရားပေါ်မှာကျန်တဲ့သူ ၃ ယောက်ကို ထပ်ဖမ်းတယ်၊ အခုလောလောဆယ် အားလုံး ၈ ယောက်ပေါ့ ၊ ပြည်ကတာဝန်ခံ ၂ ယောက်ရှိတယ်လေ၊ သူတိုိ့ကို ကိုယ်ပိုင်အာမခံနဲ့ တောင်းထားတယ်၊ အဓိက နှစ်ယောက်ပဲ တရားစွဲတယ်၊ ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ ဝန်းရံသူတွေအနေနဲ့ တရားတော့မစွဲဘူး"
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၆ ရက်နေ့က စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ပြည်နဲ့ နတ္တလင်းမြို့က ကျောင်းသားတွေ အပါအဝင် လူငယ်တွေကို တရားစွဲထားတာကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။
ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်သူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရန်ပိုင်ထက်နဲ့ ကိုစစ်မြတ်မင်းတို့ကို ငြိမ်းစုစီဥပဒေပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲထားပြီး ကျန်တဲ့သူ ၆ ဦးကိုတော့ တရားစွဲမှာ မဟုတ်ကြောင်း ရဲစခန်းက ပြောခဲ့တယ်လို့ ကိုမေတ္တာဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြပွဲဟာ ခွင့်ပြုချက်မတင်ဘဲ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့က မနေ့က ကျောင်းသားတွေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ကာ ဆန္ဒပြဖို့အတွက် စာတင်ဖို့ပြောကြားခဲ့သေးတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် ငြိမ်းစုစီဥပဒေပုဒ်မနဲ့ တရာစွဲခံဆို ထားရသူ ဦးရေ ၅ဝ ကျော်ရှိပါတယ်။
စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနေရာအတွက် ခန့်အပ်ခံရတဲ့ ဦးစိုးဝင်း ကို တွေ့ရစဉ်/ Photo: Mar Mar Swe's Facebook
လစ်လပ်နေတဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာအတွက် ဦးစိုးဝင်းကို ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြု ခန့်အပ်လိုက်လိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဦးစိုးဝင်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီး ဒီကနေ့ကျင်းပ တဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက် အတည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
‘’စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ဦးစိုးဝင်းအား ခန့်အပ်တာဝန်ပေး လိုကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တင်ပြချက်ကို ၂၈. ၅. ၂၀၁၈ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ကန့်ကွက်လိုတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါက အမည်စာရင်းပေးပို့ရမယ့် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချိန်ထိ ကန့်ကွက်ချက်တစ်စုံတရာမရှိတဲ့အတွက် ဦးစိုးဝင်း အား စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် လွှတ်တော်ကသဘောတူကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၂၈ နဲ့အညီ ကြေညာပါတယ်။’’
အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရပြီး စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရာထူး က နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ ဦးကျော်ဝင်းရဲ့ နေရာမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းဟာ အသက် ၈၀ ရှိပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ အသက်အရွယ်အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဦးစိုးဝင်းကို မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဝိဇ္ဇာ၊ ဥပဒေဝိဇ္ဇာ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဒီပလိုမာ (BA, BL.,DMA) ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး Deloitte Touche Myanmar Vigour Advisory Limited မှာ Country Managing Partner အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
ဟားခါးမီးလောင်မှူ လူ ၃ ဦးသေဆုံး
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့တွင် ယမန်နေ့ည သန်းခေါင်ကျော်အချိန်ခန့်က မီးလောင်းကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီး ဟားခါးမြို့ နာရီစင်အနီး ပုလဲစတိုးဆိုင်အပါအ၀င် လူနေအိမ်များမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် အမျိုးသမီး (၃)ဦး(Van Bawi Zi, Daw Vui Cer, A HAN NU) သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ကနဦးသတင်းအရ သိရသည်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်းကိုမူ မသိရသေးပေ။
(Photos- ဟားခါး (ပြန်/ဆက်) ၊ The Chinland Post)
ကျောင်းသင်ရိုးမှာ နှစ်နိုင်ငံ သမိုင်းတည်းဖြတ်ခွင့် ပညာရေး သဘောတူမှု အစ္စရေး-မြန်မာ ချုပ်ဆို
ဒီသဘောတူညီချက်အရ holocaust လို့ခေါ်တဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေကို နာဇီတွေ အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့ပေး သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ မတူကွဲပြားမှုကို လက်မခံတဲ့ကိစ္စ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ကိစ္စ၊ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားသားကြောက်ရွံ့စိတ်တို့ဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆိုးကျိူးတွေကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ ထည့်သွင်းသွားနိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ အစ္စရေးနိုင်ငံ Haaretz သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်၊၊